Fanampenam-bava · Marsa, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Fanampenam-bava · Marsa, 2019
Tantara mikasika ny Fanampenam-bava tamin'ny Marsa, 2019
Mpandraharaha Slovaky voampanga ho nanome baiko ny famonoana ilay mpanao gazety Ján Kuciak sy ny fofombadiny
Eoropa Afovoany & Atsinanana 28 Marsa 2019
"Dingana iray manan-danja izany, ary anisan'ny tsy fahita firy amin'ny famonoana ireo mpanao gazety. Manantena izahay fa hitazona ny fampanantenany amin'ny hitondrana ireo nahavanon-doza rehetra any amin'ny fitsarana ny manampahefana."
Mpanao gazety Rosiana noterena hiala noho ny fitsikerany ireo manampahefana ao St. Petersburg tao amin'ny fantsona Telegram
Eoropa Afovoany & Atsinanana 23 Marsa 2019
Nilaza i Maria Karpenko, mpanao gazety ao amin'ny Kommersant, iray amin'ireo gazety mpivoaka isan'andro malaza ao Rosia fa noterena hametra-pialana izy rehefa avy nifanatrika taminy momba ny fantsona Telegram tantaniny ny lehiben'ny tonian-dahatsoratra.
‘Tsy raboto izahay!’ Fihetsiketsehana ao Berlin manohitra ny fitsipiky ny Vondrona Eoropeana momba ny sivana amin'ny fampidirana votoaty antserasera
Eoropa Afovoany & Atsinanana 22 Marsa 2019
Olona 5.000 teo ho eo no nivory tao Berlin tamin'ny 2 martsa mba hanohitra ny fitsipiky ny Vondrona Eorpeana mifehy ny zon'ny mpamorona izay mety hanova tanteraka ny fahavitrihana amin'ny fandefasana sy fizarana votoaty an-tserasera.
Noraràn'ny manampahefana Rosiana ny famokarana teatira ho an'ny tanora noho ny fampiroboroboana ny ‘fifandraisana ara-pianakaviana tsy nentim-paharazana’
Eoropa Afovoany & Atsinanana 19 Marsa 2019
Vao haingana i Rosia no nandany andianà lalàna mpandala ny nentin-drazana ara-tsosialy mikendry ireo mpikatroka, vondrona mpiaro ny zo ary ny fampitam-baovao an-tserasera ho an'ny rehetra izay lazaina fa "mampiroborobo ny faha-pelahana ho an'ny ankizy tsy ampy taona."
Nahoana ny Repoblika Islamika no matahotra an'i Nasrin Sotoudeh?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Marsa 2019
"Manafintohina", "tsy rariny", "devoly" sy "henatra mitabataba" no anisan'ireo teny nolazain'ireo mpiaro ny zon'olombelona sy Iraniana maro ao amin'ny media sosialy momba ny fandrenesena ny vaovao manafintohina fa voasazy higadra 38 taona an-tranomaizina sy kapoka karavasy in-148 i Nasrin Sotoudeh, Iraniana malaza mpiaro ny zon'olombelona.
Miezaka manara-baovao ao Venezoela? Ireto misy loharanom-baovao vitsivitsy azonao atokisana
Amerika Latina 16 Marsa 2019
Mahita fomba hanangonana, hikarakarana sy hanombanana vaovao amin'ny fombany manokana ny Venezoeliana.
Tsy hita tany Venezoela i Luis Carlos Diaz, mpanao gazety nomerika
Amerika Latina 13 Marsa 2019
"Iray amin'ireo endrika miavaka indrindra amin'ny asa fanaovan-gazetin'ny mpanohitra any Venezoela" i Luis Carlos .
Nandroaka mpiasa ambony tao amin'ny orinasan'ny fifandraisan-davitra MTN i Oganda noho izy ireo lazaina fa mitsikilo
Afrika Mainty 08 Marsa 2019
Nanamafy i Namaye fa natao fanadihadiana izy roa ireo nandritra ny "fotoana fohy" ary noroahana satria "nihevitra izahay nandritra ny fanadihadiana fa raha mbola mijanona [ao Oganda] ry zareo, dia mety hiteraka.... olana sy fahasahiranana bebe kokoa."
Nosamborin'i Samoa ilay bilaogera ‘King Faipopo’ voampanga ho nanala baraka ny praiminisitra
Oseania 01 Marsa 2019
Nosamborin'ny polisy Samoanina ilay bilaogera monina any Aostralia, Malele Paulo tamin'ny 8 Febroary raha nitsidika ny firenena hanatrika ny fandevenana ny reniny. Malele dia mpitsikera fanta-daza ny governemanta izay manoratra amin'ny anarana hoe King Faipopo.